I-Satin Eye Mask Suppliers kanye neFektri - China Satin Eye Mask Abakhiqizi
Ukukhanya kuyisitha sokulala, ngakho-ke lesi sisebenzi sezimangaliso sikusiza ukuthi uthole ubumnyama ngokuphelele lapho uthanda khona. Isifihla-buso sethu senziwe nge-satin ethambile .Futhi iphindwe kabili njengebhande lekhanda lenqubo yakho yobuhle yasebusuku - empeleni ayinacala. Isifihla-buso se-satin esithambile kakhulu ngombhalo owenziwe waba ngowakho, uzomenzela isipho esiyingqayizivele esihle kakhulu kuye! • Usayizi: Usayizi owodwa ulingana kakhulu (ibhande elishintshekayo) Ukwamukelwa kosayizi ngokwezifiso. Ukukala: Usayizi Wabadala - 20cm x 10cm, Usayizi Wezingane - 17cm x 8cm • Izinto: Satin • Mu ...
Imaskhi yesakhiwo sokuphrinta yangokwezifiso
Imfashini yeso lesakhiwo semfashini
Imaski yeso yombala oluhlaza okwesibhakabhaka
Imaski yokulala ngombala oqinile
I-Poly satin eye mask
Isifihla-buso sombala opinki